Kabareyaasha Carruurta Kabo Ma Lahan | Martech Zone
Carbiile-yaasha Cobblers-ka Kabo Ma Lahan
Talaado, Janaayo 26, 2010 Talaado, September 1, 2015 Douglas Karr
Shalay waxaan kula kulmay halkan aqoonyahan ku xeel dheer suuqgeynta. Waxay ahayd kulan weyn runtiina waan ku qanacsanahay jawaab celinta adag ee aan ka helay goobtayda shirkadeed. Si fudud haddii loo dhigo, waxaan qotomiyay bog hal bog ah oo xushmad leh 6 bilood ka hor weligayna kuma soo dhowaan inaan beddelo.
Xitaa waxaan qabtay shaqooyin baaxad leh anigoo kaashanaya Mark Ballard goob cusub… oo ay weheliyaan qaar ka mid ah sawirada iStockphoto ee weyn. Waxay noqon laheyd mid la yaab leh - haddii aan waligey waqti helo si aan dhab ahaantii u dhammeeyo.
Runtu waa, anigu ma hubo inaan sidaas yeeli doono weligiisba waqti u hel inaad ku dhamayso. Markaa ... Waan khiyaameeyay oo waxaan helay sheeko cajiib ah oo aan awooday inaan ku iibsado kuna habeeyo saacado gudahood. Waxay igu haysay ilaa 4-tii subaxnimo ee saaka, laakiin barta cusubi waa mid fudud, illaa heer, waxayna bixisaa dhammaan macluumaadka uu qof uga baahan yahay waxa ay tahay DK New Media sameeyo.
Waan jabiyay mid ka mid ah sharciyadaydii naqshadaynta - anigoo gelinaya waxyaabaha ku jira farta cad oo ku taal meel madow. Taasi waxay sii adkeyneysaa dheefshiidka; si kastaba ha noqotee, waxaan ku saabsan ahay glitz-ka boggan oo runti kama fiirsanayo sii-haynta booqdayaasha inta badan. Boggan hal bog ah waa mid aad u gaar ah (hubi inaad dhex socoto oo gujiso qaybta adeegyada).
Waxaa jiri doona qaybta la-hawlgalayaasha mustaqbalka dhow maxaa yeelay taasi waa aqlabiyad badan oo istiraatiijiyadayda ganacsi. Ii sheeg sida aad u jeceshahay illaa iyo hadda, in kastoo!
Tags: DK New MediaWordPressgoobta saxda ah
10 Blog Blog oo aadan ka ogeyn
Email Email + Alt Tags = Bagels More La Iibiyay